ဘရာဇီးမှာ ပထဆုံးအမျိုးသမီး သမ္မတ ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာလား? | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Home » News » ဘရာဇီးမှာ ပထဆုံးအမျိုးသမီး သမ္မတ ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာလား?
ဘရာဇီးမှာ ပထဆုံးအမျိုးသမီး သမ္မတ ပေါ်ပေါက်လာတော့မှာလား?
Posted by မမလေး on Oct 10, 2010 in News |0comments
ဘရာဇီး၏ တနင်္ဂနွေနေ့ (၃.၁၀.၂၀၁၀) ရွေးကောက်ပွဲရလဒ်မှာ ပြတ်ပြတ်သားသား မပေါ်ခဲ့သဖြင့် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်တွင် ရွေးကောက်ပွဲ ပြန်လည် ကျင်းပရဦးမည် ဖြစ်သည်။
အလုပ်သမားပါတီ၏ သမ္မတလောင်း ဂျေးမာ ရူးစဲ့ဖ် မဲဆွဲပွဲတွင် သမ္မတ ဒါ စေးဗာနှင့်အတူ တွေ့ရစဉ်
လက်ရှိ သမ္မတ လူဝစ် အီနားစီယို လူးလာ ဒါ စေးဗါ (Luiz Inácio Lula da Silva) က သူ့၏ သမ္မတရာထူးအား ဆက်လက်ခံယူသွားရန် ပြုစုပျိုးထောင်ပေးထားသော ဦးစီးအရာရှိချုပ် (Chief of Staff) ဖြစ်ခဲ့သော ဂျေးမာ ရူစဲ့ဖ် (Dilma Rousseff) သည် မဲ ၅၀% ကျော်ဖြင့် သမ္မတ ဖြစ်လာမည်ဟု သဘောထားကောက်ယူပွဲ (opinion poll) များအရ မျှော်လင့်ထားခဲ့ကြသော်လည်း မဲများရေတွက်ပြီးသောအခါတွင် သူမမဲ ၄၆.၉ % သာ ရှိသဖြင့် အောက်တိုဘာ (၃၁) ရက်နေ့ရွေးကောက်ပွဲတွင် အဖြေဖော်ရမည် ဖြစ်သည်။
သမ္မတ ဒါ စေးဗါ (President da Silva) မှာ နိုင်ငံသားများကြား ထောက်ခံချက် များစွာရသည် အထူးသဖြင့် ဆင်းရဲသားများသော အရှေ့မြောက်ပိုင်းနှင့် လျင်မြန်စွာ ကြီးထွားလာသော လူလတ်တန်းစား၏ အောက်ပိုင်းအလွှာတွင် လူကြိုက်များခဲ့သည်။
သို့ရာတွင် သူပြုစုပျိုးထောင်ခဲ့သော သမ္မတလောင်းသည် မဲအပြတ်မနိုင်ခဲ့ပါ။ ဂျေးမာ ရူစဲ့ဖ် (Dilma Rousseff) သည် ၁၉၆၀ ခုနှစ်များတွင် အာဏာရှင်စစ်အစိုးရအား ဆန့်ကျင်သော ပြောက်ကျားအဖွဲ့များ၏ အဖွဲ့ဝင်တစ်ဦးဖြစ်ရာ လက်ဝဲယိမ်း ဝါဒီ ဖြစ်နေမည်လားဟု သံသယရှိနေသူ အနည်းငယ်ရှိသည်။
ယခင်နှစ်ပတ်ခန့်က ထွက်လာသောသတင်းလောကမှ စွပ်စွဲချက်များတွင် သူမ၏ ရာထူးအား ဆက်ခံသူ အီရန်နစ် ဂွေရာရ် (Erenice Guerra) ၏ သားသည် အစိုးရ လုပ်ငန်းများအတွက် ကန်ထရိုက်ဆွဲသော ကုမ္ပဏီများနှင့်စီးပွားရေး ပါဝင်ပတ်သက်မှုများ ရှိသည်ဟု ဖော်ပြသည်။
မစ္စ ဂွေရာရ် (Ms. Guerra) သည် သူမ၏ ရာထူးမှ နှုတ်ထွက်သွားခဲ့သည်။ ယင်းကိစ္စတွင် ဂျေးမာ ရူစဲ့ဖ် (Dilma Rousseff) တိုက်ရိုက် ပါဝင်ပတ်သက်သည်ဟု စွပ်စွဲခြင်း မရှိခဲ့ပါ။ ကိုယ်ဝန်ဖျက်ချခြင်းသည် လူထုကျန်းမာရေး ကိစ္စဖြစ်ပြီး ဘာသာရေးနှင့် မဆိုင်ဟု မစ္စ ရူစဲ့ဖ် (Ms. Rousseff) က ဆိုခဲ့ခြင်းက နောက်ဆက်တွဲ ရွေးကောက်ပွဲကို ဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟု စောင်ပေါ်လို (São Paulo) ရှိ (Tendencias Consultoria Integrada) ၏ နိုင်ငံရေး သိပ္ပံပညာရှင် ရာဖာယဲလ် ကော်တစ် (Rafael Cortez) က ပြောသည်။ ရွေးကောက်ပွဲ ဂျေးမာ ရူစဲ့ဖ် (Dilma Rousseff) က ၄၆.၉%၊ စောင်ပေါ်လိုပြည်နယ် (São Paulo state) ၏ ပြည်နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး (state governor) ဇျူးဇေး စဲရာ (José Serra) က ၃၂.၉ % မဲအသီးသီးရကြရာ သူတို့နှစ်ဦးစလုံးသည် မဲရွေးပွဲတွင် ၁၉.၃ % နှင့် တတိယနေရာရသူ မာရီးနာ စေးဗာ (Marina Silva) ၏ ထောက်ခံချက် ရရန် သူမအား ချဉ်းကပ်နေကြသည်။ ပေါ်တူဂီစကား ပြောသော ဘရာဇီးလ်တွင် José Serra ဆိုသည့်နာမည်မှ José အား သူ၏ အိမ်နီးချင်း နိုင်ငံများမှာကဲ့သို့ “ဟိုဆေး” ဟု အသံမထွက်ပါ။
မဲရွေးပွဲတွင် ဒုတိယလိုက်သူ ဇျူဇေး စဲရာ
မစ္စ ရူစဲ့ဖ် (Ms. Rousseff) နှင့် မစ္စတာ စဲရာ (Mr. Serra) တို့သည် မစ္စ စေးဗာ (Ms. Silva) အား ထောက်ခံသူများအား မိမိဘက်ပါရန် အပြိုင်အဆိုင် ကြိုးစားနေကြသည်။
မဲရွေးပွဲတွင် တတိယနေရာမှ မာရီနာစေးလ်ဗာ
မာရီနာ စေးဗာ (Marina Silva) အား ထောက်ခံသူများထဲတွင် ပတ်ဝန်းကျင် ထိမ်းသိမ်းရေးလှုပ်ရှားသူများ၊ တက္ကသိုလ် ဘွဲ့ရ အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းလုပ်ငန်းတွင် ရောက်နေသူများနှင့် ခရစ်ယာန်ဘာသာရေး လိုက်စားသူများပါ ၎င်းတို့မှာ ဂျေးမာ ရူစဲ့ဖ် (Dilma Rousseff) ၏ ကိုယ်ဝန် ဖျက်ချခြင်းအား တရားဝင် လုပ်လိုခြင်းကြောင့် သူမဆီမှ မာရီနာ စေးဗာ (Marina Silva) ဘက်သို့ ကူးပြောင်းလာသူများ ပါသည်။ ဘရာဇီးလ်နိုင်ငံတွင် ပထမဆုံးအမျိုးသမီး သမ္မတ ပေါ်ထွန်းလာမည်လားကိုမူ အောက်တိုဘာ (၃) ရက်နေ့ ရွေးကောက်ပွဲကသာ အဖြေပေးပေမည်။
Brazilian Leader’s Protégée Likely to Prevail in Election (The New York Times) Brazil Presidential Candidates Court Silva Before Runoff to Decide Contest (The Bloomberg) José Serra (Wikipedia) Dilma Rousseff (Wikipedia)